ကျွန်တော့်အတွေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျွန်တော့်အတွေး
Posted by ခ်စ္ရင္ထူး II on Jul 29, 2012 in Copy/Paste | 14 comments
ကျွန်တော်က အတွေးသမားဆိုတော့(နည်းနည်းတော့ခွင့်လွှတ်ပါ) သူများပြောတော့မှသိရပြီး ကိုယ့်တာဝန် ဆိုတဲ့ပိုစ့်ကို ဖတ်မိပါတယ် .. ကိုကြောင်ဝတုတ်ပြောသလို ၃ ကြိမ်လောက်ဖတ်တာလည်း နားမလည်နှိုင်ပါဘူး ။ ဆက်တွေးကြည့်ပါတယ် ။ ပြပွဲဆိုတာ ကိုယ်နဲ့လည်း ပတ်သက်တာကိုး .. ပြပွဲဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ကူးပါ ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးဖြစ်ပြီးတော့ သူကြီးနဲ့ ကိုဂီက အားဖြည့်ပါတယ် ။ နောက်တော့ ကိုလုလင် အားဖြည့်ပါတယ် ။အဲဒီလိုကနေ အလုပ်နည်းနည်းများတာက တစ်ကြောင်း ၊ နောက်တစ်ခုကတော့ ကိုမှော်က ကျွန်တော့်ကို ခေါင်းစဉ်မပေးတာပါ ။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ် ။ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ နည်းနည်း သိသယောင်ယောင်ဖြစ် (သေချာတွေးမှ ကျွန်တော်က ခွေးဖြစ်နေပြီး မှော်ဆရာက မြင်းဖြစ်နေမှန်း ဇာတ်ရေလည် ပါတော့တယ် )နေတဲ့အချိန်မှာ ရွာထဲက ရွာသူအသစ်လေး shwe zin ရေးတဲ့ပိုစ့်ကိုဖတ်ရာမှ အတွေးတစ်ခုရခဲ့ပါတယ် ။
ချိုပေါ့ကျ ပိုင်ရှင် ဘလက် ၊ ဒက်ဂလောက် ဂီ
တဲ့ . သူက မူပိုင်ခွင့်ကိုပြောပါတယ် .. ကျွန်တော်က ဒက်ဂလောက် လို့ပြောချင်ရင် ကိုဂီ ဆီက ခဏငှါးသုံးရပါမယ် ။ ဒီမူပိုင်ခွင့်က သေးသေးမွှားမွှားလေး ဆိုတော့ ဥပဒေ နဲ့မဆိုင်သေးပေမယ့် လူ့ကျင့်ဝတ်၊ နဲ့တော့ဆိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ ကျွန်တော်က Max ဆိုပြီး အချိုရည် ထုတ်လို့မရပါဘူး ။ သူနာမည်ကြီးပြီးသားကို ကျွန်တော်က ဝင်ချင်ရင် တော့ တရားစွဲခံရမှာပါ ။ ။
ကျွန်တော့်အတွေး ပါးပါးလေးပါ ..(ကိုပေါက်ရေ ခဏငှါးပါတယ်ဗျာ) ..
ကျန်တာကတော့ ရွာသူရွာသားတွေ ဆက်စဉ်းစားဖို့ပါ ..
* ယောဆရာကြီးရေ ဆရာကဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်နဲ့ရေးတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်မသိပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်နားလည်သလို တွေးလိုက်ပါပြီ .. တယ်တော်တဲ့ဆရာပါလားဗျာ ..
ကဗျာ ဆိုလည်းဒီလိုပါပဲလေ စာရေးသူက ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ကိုယ်ရေးတာ ဖတ်တဲ့သူကလည်း သူ့ခံစားချက်နဲ့သူဖတ်တာ တူချင်လည်း တူမယ် တူချင်မှလည်း တူမယ်ပေါ့လေ ..
ဘယ်ကဗျာဆရာကမှ တည့်မရေးတာကိုတော့ သတိထားမိပါတယ် ..
ကျွန်တော်ရေးတဲ့အထဲ အမှားပါးရင် ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါတယ် ..
နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ လို့ ….
အဲဒါ ညည်းအလားနေရင်း ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးနေလို့ ဖြစ်တာ သိလား ….. ဓာတ်ပုံပြပွဲကို ညည်းကစတယ် ပြီးရင်ညည်းပျောက်ပျောက်နေတယ် ကွန်ပျူတာပျက်တာနဲ့လိုင်း မကောင်းတာနဲ့ တွေးနေတာနဲ့ ငေးနေတာနဲ့ … အဲလိုလုပ်လို့ ဒီလိုဖြစ်တာ အားလုံးညည်းအပြစ် ပထမစစတုန်းက ညည်းကပို့စ်တင်တယ် ကိုဂီကညည်းကိုယ်စား အားလုံးကိုဖြေကြားပေးနေရတယ် …. တော်ရုံဆိုညည်းစတဲ့ဇာတ်လမ်းကို ညည်းကဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလေ့မရှိဘူး ဒုတိယပြပွဲဖြစ်တဲ့ ချစ်စရာအရွယ်တုန်းကလည်း ညည်းပျောက်နေတယ် ကိုဂီတစ်ယောက်တည်း ဖြေပေးပြောပေးနေတယ် …
အားလုံးညည်းအပြစ် သိပ်မတွေးနဲ့ အခုမှ ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ် နောက်ပြီးတော့လည်း တစ်ခုခုဆို ပါးပါးလှပ်လှပ်ရှိအေ ….ဒါပဲပြောချင်တယ်
ညီမ ခိုင်ခိုင့် လေသံ ကြည့်ရတာ တော့ .. ဝက်သားဒုတ်ထိုး ရောင်းလို့ ရခါနီး ပြီ ထင်တာပါပဲ ….
စာရေးသူ ယောဆရာကြီး ပဲ ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ ဗျာ
သူလာရှင်းရင်တော့ အကောင်းဆုံးဘဲ ဗျို ့
ကိုချစ်ရင်ထူး လဲ သို ့လော သို ့လော ဖြစ်နေဦးမှာပဲ
အိုင်ပီနံပါတ်တွေ ကို မော်ဒရေတာတွေ ပြန်စစ်ကြည့်ရင် အကောင်းဆုံးပါဘဲ
အဲဒါက အဲဒီလောက်ထိ မလိုပါဘူးဗျာ . (ကျွန်တော်ထင်တာ) .. သူ့ဟာသူဘာကြောင့်ရေးရေး ပါ ..
ကျွန်တော်က ကိုယ်လုပ်သင့်တာကို လုပ်မှာပါ ..
ကျွန်တော်ကတော့ စစ်စေချင်တယ် …
နောက် ဓါတ်ပုံပြပွဲတွေမှာ ခေါင်းစဉ်ပေးမယ့် ဆရာတွေဟာ ချစ်ရင်ထူးဆီ ခေါင်းစဉ်ပို့ပေးပြီးမှ ချစ်ရင်ထူးကသာလျှင် (မူပိုင်ခွင့်လို့ဆိုသကိုး) ခေါင်းစဉ်ပေးရမယ်လို့ ဆိုလိုပါသလား …?
အဲဒီလို ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ မောင်ချစ်ရေ ..
ငါ့ အားမာန် ပိုစ့်ကို ဖျက်ပေးလိုက်တော့မယ် ..
ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်စားပြီး အချုပ်အချယ်နဲ့ လုပ်နေရတာကို ငါ မကြိုက်ဘူး ..
အနိစ္စ .. ဒုက္ခ .. အနတ္တ။
ကိုလု ဂျီတော့တစ်ချက် ဖွင့်လိုက်ပါဗျာ..
ကျုပ်လဲ သိဘူးဗျ ..နော်
လုပ်သင့်တာကို လုပ်ကြပါ .. မဖြစ်သင့်တာကို မဖြစ်ပါစေနဲ့ လို့ပဲ
အကြံလေး ပေးပါရစေ …။